बजेटले बिमा क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन - Karobar National Economic Daily
बजेटले बिमा क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन
query_builderJune 4, 2017 10:23 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility225
डा. दामोदर बसौंला बिमा विज्ञ एवं उप—प्राध्यापक, जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पस पोखरा
आगामी वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले बिमा क्षेत्र प्रति कत्तिको न्याय गरेको छ ?
बजेटले बिमा क्षेत्रलाई न्याय, अन्याय गरेको कुराभन्दा पनि बजेटले बिमा क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आफंैमा बजेटले मुख्य प्र्राथमिकताका क्षेत्रहरू भनेर नछुटाई धेरैै क्षेत्रहरूलाई एकै ठाउँमा समान प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ भने सरकारको प्राथमिकतामा छायामा परेको बिमा क्षेत्रलाई बजेटले न्याय, अन्याय गरेको भन्ने कुरै आउँदैन ।
तथापि वर्तमान बजेटमा अघि सारिएको स्वास्थ्य बिमा सराहनीय छ र सबै नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्य बिमा राज्यले अनिवार्य गराउन सकेमा तीन वर्षभित्र सबै नागरिकहरूमा स्वास्थ्य बिमा पु¥याउने सरकारको योजना सम्भव पनि छ । स्वास्थ्य बिमाको अवधारणाले नागरिकहरूमा बिमासम्बन्धी जागरुकता केही वृद्धि गरेको छ र यसले बिमाको प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पु¥याएको छ ।
सरकारले नेपाली बिमा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा धेरै हिस्सा नेपाल कै पुनर्बिमा कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्ने व्यवस्था गरिने भनेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ?
नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीको सुरुवात सन् २०१४ बाट मात्रै भएको हो । नेपालका बिमा कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो र छ । पुनर्बिमा गर्दा नेपालबाट ठूलो पुँजी बाहिरिरहेको छ ।
नेपालका बिमा कम्पनीहरूले नेपालमै पुनर्बिमा गर्ने व्यवस्था हुँदा पुनर्बिमा बापत भुक्तानी गरिने ठूलो पुँजी बिदेसिनबाट रोकिन्थ्यो तर नेपालमा भर्खरमात्र स्थापित पुनर्बिमा कम्पनीले त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन ।
५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको पुनर्बिमा कम्पनीले कसरी यति ठूलो दायित्व वहन गर्न सक्ला ? नेपालमा भएका के बिमा कम्पनीहरूको लाइफ फन्ड करिब ३० अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । सरकारले नेपालको पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न अनिवार्य गराउने योजना राख्नु राम्रो पक्ष हो ।
तर यसका लागि पुनर्बिमा कम्पनीको क्षमता बढाउनुपर्ने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आवश्यक हुन्छ । तसर्थ तत्काललाई नेपाली बिमा कम्पनीहरूले नेपालमै पुनर्बिमा गर्नको लागि सरकारले गराएको अनिवार्यता तत्काललाई सम्भव हुने देखिँदैन ।
सरकारले कृषि सहकारीलाई पनि कृषि बिमा जारी गर्न दिने व्यवस्था गरिने बताएको छ । यो कतिको उपयोगी छ ?
बिमाको नामबाट बिमासम्बन्धी कारोबार गर्न अधिकार बिमा कम्पनीहरूलाई मात्र हुन्छ, अन्य संस्थालाई हुँदैन । बिमा कम्पनीको सहकार्यमा मात्र गर्न सकिन्छ । सहकारीमार्फत कृषि बिमाको अभ्यास अन्यन्त्र देशमा पनि भएको पाइन्छ तर त्यो त्यति सफल भएको देखिँदैन । नेपालमा कृषि बिमा सुरुवात गरिए पनि त्यसको पहुँच वास्तविक कृषकहरूसम्म पुग्न सकेको छैन ।
कृषि बिमालाई सफल पार्न कृषकहरूमा बिमासम्बन्धी सचेतना वृद्धि गरी वास्तविक कृषकहरूको पहुँचसम्म यसलाई पु¥याउन आवश्यक छ । यसका लागि हाल सञ्चालित निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई यसप्रति अलि बढी क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ र आवश्यकताअनुसार छुट्टै लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्न पनि सकिन्छ ।
जहाँसम्म सहकारीलाई कृषि बिमा जारी गरिदिने कुरा छ त्यो अधिकार सहकारीलाई छैन र बिमा कम्पनीको सहकार्यमा सहकारीले गर्न सक्दछन् र त्यसो गर्न सकिएमा सरकारको यो कदम उपयोगी बन्न सक्छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमा प्रस्तुत गर्ने योजनामध्ये धेरै कम योजनाले मात्रै पूर्णता पाउने गरेका छन् ? कमजोरी कसको हो ?
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात २०१३ सालदेखि नै भएको हो तर हालसम्म आइपुग्दा योजनाहरूको आशातित सफलता धेरै कम छ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा योजना त ल्याइन्छ तर त्यसलाई समयमा सम्पन्न गर्नाका लागि काम भने सनातनी रूपमा भएको देखिन्छ ।
समयमै योजनाले पूर्णता नपाउनुमा धेरै कुराहरू कारक हुन सक्छन् । जसमध्ये राजनीतिक अस्थिरता, सरकारको कार्यशैली, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, पुँजीको अभावजस्ता तत्वहरू नै प्रमुख रूपमा योजनाको पूर्णताका बाधक तत्वहरू हुन् ।
बिमा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले कस्ता खालका योजना ल्याउनुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिला त राज्यले बिमा क्षेत्रलाई आफ्नो योजनामा प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नुपर्छ । बिमा क्षेत्रको विकास नहुनुमा प्रमुख कारण यस क्षेत्रप्रति राज्यले देखाएको उदासीनता हो ।
राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत बन्न सक्ने बिमा क्षेत्रलाई राज्यले महत्व दिनुपर्छ । आज संसारको इतिहास हेर्ने हो भने जुन देशमा बिमा क्षेत्रको विकास भएको छ ती देशहरूको आर्थिक विकास उच्च छ । बिमाको यति धेरै सम्भावना भएको हाम्रो देशमा यस क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान नगन्य छ । देश विकासको मेरुदण्ड बिमा क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने कुरा राज्यले बुझ्न सक्नुपर्छ ।
बिमा क्षेत्रको विकास गर्नका लागि राज्यले धेरै कामहरू गर्नपर्ने देखिन्छ । समग्र बिमा क्षेत्र अनुगमन गर्ने नियमनकारी निकायलाई अझ गतिशील र प्रभावकारी परिणाममुखी बनाउँदै सम्पूर्ण नागरिकमा बिमा गास, बाँस, कपास पछिको चौथो आवश्यक हो भन्ने कुराको महसुस गराउन बिमा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ एकातिर भन्ने अर्कोतिर बिमा प्रतिष्ठानको स्थापना, बिमा विज्ञहरूको उत्पादन, बिमा विषयलाई विश्वविद्यालयको पाठयक्रम समावेश गर्नेजस्ता कुराहरू त्यतिकै महत्वपूर्ण छ ।
आयकरमा दिँदै आएको छुटको दायर वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ साथै बोनसमा लगाइएको करमा समेत छुट दिनुपर्ने देखिन्छ । बिमा कम्पनीहरूलाई सहरमुखी मात्र नभई गाउँमुखी बनाउनु पनि जरुरी छ र निम्न आय वर्गका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी सोही खालका बिमा योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले अब हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा कम्तीमा पनि बिमा कम्पनीका शाखाहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ । साथै प्रत्येक संघीय प्रदेशहरूमा नियमनकारी निकायको क्षेत्रीय कार्यालयहरू स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।